I-Hydralazine HCL (304-20-1) isetyenziselwa ukuphatha uxinzelelo lwegazi oluphezulu | AASraw
/Blog/Hydralazine HCL/I-Hydralazine HCL (304-20-1) isetyenziselwa ukuphatha uxinzelelo lwegazi oluphezulu
ezaposwa ngomhla 06 / 25 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Hydralazine HCL.
1.Yintoni iHydralazine HCL?
2.How Hydralazine HCL isebenza njani?
3. Hydralazine HCL Isisombululo
4.Ukuthatha njani i-Hydralazine HCL
5. Iimpembelelo zeHydralazine HCL
6.Yiyiphi ibalulekileyo ebalulekileyo ndimele ndiyazi nge-Hydralazine HCL?
7. I-Hydralazine HCL inokusebenzisana namanye amayeza
Izixwayiso ze-8.Hydralazine HCL
I-Hydralazine isetyenziselwa ukuphatha uxinzelelo lwegazi oluphezulu (uxinzelelo lwegazi). Isetyenziselwa ukulawula uxinzelelo lwegazi oluphezulu kumama ngexesha lokukhulelwa (pre-eclampsia okanye eclampsia) okanye kwiimeko ezingxamisekileyo xa uxinzelelo lwegazi luphezulu kakhulu (ingxaki yexinzelelo).
Hydralazine Hydrochloride(Hydralazine HCL) i-hydrochloride ityuwa ye-hydralazine, inzuzo ye-phthalazine kunye nemisebenzi enokuthi i-antinoplastic. I-Hydralazine iguqula ukukhululwa kwe-calcium ye-intracellular kwaye iphazamise i-muscle ye-muscle calcium ephazamisayo, ekhokelela ekubeni i-vasodilatation ye-arterium. Le nkonzo iyakhusela i-phosphorylation yeprotoyinti ye-myosin kunye ne-chelation ye-iron trace efunekayo ukuze kuqhube umxube we-muscle, obangela ukunyuka kwenani lentliziyo, umthamo we-stroke kunye nemveliso yesimo senhliziyo. Ukongeza kwimiphumo ye-cardiovascular, i-hydralazine inqanda i-DNA methyltransferase, enokubangela ukuvinjelwa kwe-DNA methylation kwiiseli zesisu.
I-Melt Point: 280-282 ° C
Isilondolozi soMgcini: Isiqhoqho
Umbala: I-White okanye icime i-white powstalline powder
2.How I-Hydralazine HCL isebenza?
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu luyongeza kumthwalo wokusebenza kwentliziyo kunye nemithambo. Ukuba iqhubeka ixesha elide, intliziyo kunye nemithambo yegazi ayinakusebenza kakuhle. Oku kungonakalisa imithana yegazi yengqondo, intliziyo, kunye neentso, okubangelwa ukubetha, ukuhluleka kwentliziyo, okanye ukungaphumeleli kwezintso. Ukunciphisa uxinzelelo lwegazi kunokunciphisa umngcipheko wokuhlaselwa kwentliziyo kunye nemivimbo.
I-Hydralazine isebenza ngokuphucula imithana yegazi kunye nokwandisa ukunikezelwa kwegazi kunye ne-oksijini entliziyweni ngelixa kunciphisa umthwalo walo msebenzi. Akuqondi kakuhle ukuba i-hydralazine isebenza njani. Kucingelwa ukuba iziyobisi zisebenza kwimithambo yegazi ngokuthe ngqo kwaye zibuyisa kwakhona. Oku kuphumela kumanqanaba angaphantsi kweengcinezelo zegazi.
I-Hydralazine yile yeklasi yezilwanyana ezibizwa ngokuba yi-vasodilators yembambano. Iklasi leziyobisi liqela lamayeza asebenza ngendlela efanayo. La mayeza aqhelekileyo asetyenziswa ukuphatha izimo ezifanayo.
I-Hydralazine yi-vasodilator esebenza ngokuphucula izihlunu kwiimitha zakho zegazi ukubanceda bahlaziye (bandise). Oku kunciphisa uxinzelelo lwegazi kwaye kuvumela igazi ukuba liqhubele phambili ngokulula kwimifuno yakho kunye nemithambo.
3.Hydralazine HCL Isisombululo
Gcina i-hydralazine kwiqondo lokushisa lokusuka ngaphandle kobushushu nokushisa.
4 uthathe i-Hydralazine HCL
Zonke iifayili ezikhoyo kunye neefom ezinokuthi zingabandakanywa apha.Isixa sakho, ifom, kunye nendlela oza kuthatha ngayo kuya kuxhomekeka kwi:
ukuba nzima kangakanani imeko yakho
indlela osabela ngayo kwiqondo lokuqala
Isisombululo somfutho wegazi ophezulu (uxinzelelo lwegazi)
Ifomu: ithebhulethi yomlomo
Amandla: 10 mg, 25 mg, 50 mg, kunye ne-100 mg
Umlinganiselo omdala (iminyaka eyi-18-64 iminyaka)
Ukuqala umlinganiselo: I-10 mg ithathwe ngomlomo ngamaxesha e-4 ngosuku lwe-2-4 iintsuku
Ukulungiswa kwesisombululo: Ugqirha wakho unokunyusa ngokukhawuleza umthamo wakho ukuya kwi-50 mg ithatha amaxesha e-4 ngosuku.
Umyinge wezingane (iminyaka eyi-1-17 iminyaka)
Ukuqala isilinganisi: I-0.75 mg nganye ngekg isisindo somzimba ngosuku esithathwe ngomlomo kwizikolo ezine ezihlukeneyo
Ukulungiswa kwezinto: Ugqirha wakho unokunyusa ngokukhawuleza umthamo wakho kwiiveki ze-3-4.
Ubungakanani obukhulu: 7.5 mg nganye ngekg isisindo somzimba okanye i-200 mg ngosuku
Qaphela: Esi sizaziso asizange sifunde kwizilingo zeklinikhi kubantwana abangaphantsi kwe-18 iminyaka, kodwa sele isetyenziswe kubantwana.
Umlinganiselo omdala (iminyaka eyi-65 nangaphezulu)
Akukho zikhombululo ezicacileyo eziphezulu kwi-dosing. Abantu abadala abakwazi ukucwangcisa iziyobisi ngokukhawuleza. Umtya omdala oqhelekileyo unokubangela ukuba amazinga alesi siza aphakame kunokoqhelekileyo emzimbeni wakho. Ukuba uphezulu, ungadinga umthamo ophantsi okanye ishedyuli eyahlukileyo.
5.Iimpembelelo zeHydralazine HCL
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo
ukulahleka kwesidlo (i-anorexia)
Iziphumo ezibi kakhulu
Izimpawu ezinxulumene neentliziyo, ezifana ne:
uxinzelelo lwegazi oluphantsi (hypotension)
ukungcola okanye ukuphazamiseka
ukuvuvukala emacaleni nasemilenzeni
Iingxaki zemisipha. Iimpawu zingabandakanya:
ukunqunyulwa okanye ukubetha kwesikhumba sakho
Ukuxinezeleka okanye uxhalabe. Iimpawu zingabandakanya:
bazive bexhalabile okanye bephezu
ungenomdla kwimisebenzi oqhele ukuyenza
Indlela yokuphendula. Iimpawu zingabandakanya:
intlungu kumalungu akho
Akufanele usebenzise le nyilisi ukuba unobungozi kwi-hydralazine, okanye ukuba unesifo se-coronary disease, okanye isifo senhliziyo esishukumisayo esichaphazela i-mitral valve.
Ngaphambi kokuba uthathe i-hydralazine, xela ugqirha wakho ukuba unesifo sezintso, lupus, angina pectoris (intlungu yesifuba), okanye ukuba wabuya unomdla.
Ngethuba uthabatha i-hydralazine, thintela ukuvuka ngokukhawuleza ukusuka kwindawo ehleli okanye elala, okanye usenokuziva udizzy. Vuka ngokukhawuleza kwaye uzinze ukuze ukhusele ukuwa.
Shayela ugqirha wakho ngoko nangoko ukuba unesiphumo esichukumisayo sogqirha okanye ukubethekisa intliziyo, ukuvuvukala, ukugubungela okanye ukubetha, umchamo omnyama, intlungu kunye okanye ukuvuvukala ngomkhuhlane, intlungu yesifuba, ukungabi namandla okanye ukhathala, kunye nokuvuthwa ngaphantsi kwexesha eliqhelekileyo okanye akunjalo.
I-Hydralazine isetyenziselwa ukuphatha uxinzelelo lwegazi oluphezulu (uxinzelelo lwegazi).
I-Hydralazine ingasetyenziselwa ezinye iinjongo ezingabhalwanga kule khowudi yeyeza.
Akufanele usebenzise le nyilisi ukuba unobungozi kwi-hydralazine, okanye ukuba unayo:
yesifo somgulo; okanye
isifo senhliziyo esisifo se-rheumatic esichaphazela i-mitral valve.
Ngaphambi kokuba uthathe i-hydralazine, xelela ugqirha wakho ukuba unobungozi naziphi na iziyobisi, okanye ukuba unayo:
i-angina pectoris (intlungu yesifuba); okanye
ukuba uke wabuhlungu.
Ukuba unayo le miqathango, unokufuna ukulungiswa kwentsholongwane okanye iimvavanyo ezizodwa ukuze uthathe le nyeza ngokukhuselekileyo.
Udidi lwe-FDA lokukhulelwa C. Le nyanga inokuba yingozi kumntwana ongakazalwa. Tshela ugqirha wakho ukuba ukhulelwe okanye ucwangcise ukuba ukhulelwe ngexesha lotyando.
I-Hydralazine ingadlula ubisi lwebele kwaye inokulimaza umntwana oswele. Ungayisebenzisi le nyanga ngaphandle kokuxelela ugqirha ukuba uncelisa umntwana.
I-7.Hydralazine HCL inokusebenzisana namanye amayeza
I-tablet ye-Hydralazine yomlomo iyakwazi ukusebenzisana namanye amayeza, amayeza, okanye iivithamini onokuzithatha. Yingakho ugqirha wakho kufuneka alawule onke amayeza akho ngokucophelela. Ukuba unomdla malunga nokuba le nkunkuma ingasebenzisana njani nento enokuyithathayo, xela ugqirha okanye ophmistri.
Qaphela: Unokunciphisa amathuba akho ekusebenzisaneni kwezidakamizwa ngokuba zonke iimfuno zakho zizaliswe kwi-pharmacy efanayo. Ngaloo ndlela, ikhemistiki ingakwazi ukujonga ukusebenzisana kwezidakamizwa.
Imizekelo yamachiza anokusebenzisana ne-hydralazine ibhalwe apha ngezantsi.
I-Monoamine oxidase inhibitors (i-MAOIs) inokunyusa imiphumo ye-hydralazine. Oku kuphakamisa umngcipheko weempembelelo zecala, ezifana nokunyuka kwengcinezelo yegazi (hypotension). Ezi zi yobisi ziquka:
Esi sidakamizwa singabangela ukuwa kwexinzelelo kwigazi xa kusetyenziswa i-hydralazine.
I-Hydralazine inokubangela ukuba kube nzima ukuphendula. Iimpawu zingabandakanya:
ukuvuvukala komqala wakho okanye ulwimi
Ungathathi kwakhona le mveliso ukuba uye wafumana indlela yokuphendula ngayo ngaphambili. Ukuyithatha kwakhona ingaba yingozi (kubangela ukufa).
Ukusetyenziswa kweziphuzo eziqulethe utywala kunokunyusa uxinzelelo lwegazi-iziphumo ezincitshiswayo ezisuka kwi-hydralazine. Ukuba usela, utshele ugqirha wakho.
Izilumkiso zamaqela athile
Kubantu abaneengxaki zentliziyo: Sebenzisa le chiza ngokuqaphela ukuba unengxaki yeentliziyo. I-Hydralazine inokubangela ukuhlaselwa kwentliziyo, ngakumbi ukuba sele sele unemiba yeentliziyo. Qiniseka ukuxelela ugqirha wakho malunga nesimo senhliziyo ngaphambi kokuthatha i-hydralazine.
Abafazi abakhulelweyo: I-Hydralazine yiklasi C yokukhulelwa kweziyobisi. Oko kuthetha izinto ezimbini:
1. Uphando kwizilwanyana lubonise imiphumo emibi kumntwana xa umama ethatha isiza.
2. Akukho zifundo ezaneleyo ezenziwa ngabantu ukuqinisekisa ukuba izidakamizwa zinokuchaphazela njani umntwana.
Tshela ugqirha wakho ukuba ukhulelwe okanye uceba ukukhulelwa. I-Hydralazine kufuneka isetyenziswe ngexesha lokukhulelwa kuphela ukuba inzuzo enokuthi iqinisekise ukuba ingozi ibe yintsholongwane yomntwana.
Kwabesetyhini abancancisayo: Inani elincane le-hydralazine lingadlula ubisi lwebele. Nangona kunjalo, eli liyeza alisoloko lenza iziphumo zecala kumntwana obelethwe. Ukuba uncelise umntwana wakho, xela ugqirha wakho malunga nokukhuselwa kwesi siza.
Kubadala: Abantu abadala abakwazi ukucwangcisa iziyobisi ngokukhawuleza. Umtya omdala oqhelekileyo unokubangela ukuba amazinga alesi siza aphakame kunokoqhelekileyo emzimbeni wakho. Ukuba uphezulu, ungadinga umthamo ophantsi okanye ishedyuli eyahlukileyo.
Kubantwana: Esi sidakamizwa asifundwanga kubantwana abangaphantsi kwe-18 iminyaka, kodwa sele isetyenziswe kubantwana.
tags: athenge i-Hydralazine HCL powder, Hydralazine HCL powder
I-Hydralazine HCL (304-20-1): Umsebenzi kunye nesisombululo kunye nemiphumo emibi	Yinto Yonke Into Okufuneka Uyiqonde NgoBurtezomib